अब्राहमका सन्तानहरू, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
चर्च उसको शरीर हो र उहाँ त्यसमा पूर्णरूपले बस्नुहुन्छ। जसले आफ्नो उपस्थितिमा सबै कुरा र सबैलाई भर्नुहुन्छ (एफिसी १:२०)।
गत वर्ष हामीले एक राष्ट्रको रूपमा हाम्रो अस्तित्व सुनिश्चित गर्न युद्धमा सबैभन्दा ठूलो त्याग गर्नेलाई सम्झ्यौं। सम्झनु राम्रो छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, यो परमेश्वरको मनपर्ने शब्दहरूमध्ये एक हो जस्तो देखिन्छ किनभने उसले यसलाई धेरै चोटि प्रयोग गर्छ। उहाँ निरन्तर हामीलाई जरा र हाम्रो भविष्य बारे सचेत रहन सम्झाउनुहुन्छ। यो ऊ को हो र हामीलाई हाम्रो कत्ति ख्याल राख्छ भन्ने हामीलाई सम्झाउने बारेमा हो; हामी चाहन्छौं कि हामी को हौं भनेर उहाँ जान्न चाहनुहुन्छ र असुरक्षित, प्रभावहीन वा शक्तिहीन महसुस गर्ने कुनै कारण छैन; किनकि हामीमा ब्रह्माण्डको शक्ति छ जुन हामीमा ख्रीष्टको शरीरको रूपमा बास गर्छ। माथिको पद हेर्नुहोस्। शक्तिको यो अद्भुत उपहार केवल हामीमा बास गर्दैन, तर अरूलाई सशक्त पार्न बाहिर निस्किन्छ। «जोह। 7:37 "यदि कसैले ममाथि विश्वास गर्दछ भने, जीवित पानीका खोलाहरू भित्र बग्नेछन्।"
तर दुर्भाग्यवस, मानवको रूपमा, हामी यसलाई धेरै पटक भुल्छौं। टेलिभिजन कार्यक्रममा "तपाई को मतलब तपाई को हुनुहुन्छ?" सहभागीहरूसँग तपाइँका पुर्खाहरूलाई चिन्न, उनीहरूलाई चिन्न, उनीहरूको जीवनशैली र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा पनि तपाइँको फोटोहरू हेर्नको लागि अवसर छ। मसँग आफ्नी श्रीमती, आमा, हजुरआमा र हजुरआमाजीका फोटोहरू छन् तर यी फोटोहरूले मेरो छोरालाई उनको आमा, हजुरआमा, हजुरआमा र हजुरआमा-हजुरआमा देखा पर्दछन्! र पक्कै पनि यसको मतलब उसको छोराले उसको हजुरआमा, हजुरआमा, हजुरआमा-हजुरआमा र महान-महान-हजुरआमाको झलक देख्नुहुन्छ! यसले मलाई धर्मशास्त्रको खण्डको सम्झना गराउँछ जुन म लामो समयको लागि बिर्सेकी थिएँ।
यशैया :१: १-२ “मेरो कुरा सुन, धार्मिकताको पछि लाग्नेहरू हो, प्रभुलाई खोज्नेहरू! तपाईले बनाएको चट्टानलाई हेर्नुहोस् र तपाईले खनेको राम्रो तरिका! तपाईंको बुबा अब्राहाम र सारालाई हेर्नुहोस्, जसले तपाईंलाई जन्म दिनुभयो। किनभने मैले उसलाई एक व्यक्ति भनिन्छ र मैले उसलाई आशीर्वाद दिएँ र बढाउँदै गएँ।
एक कदम अगाडी हामी जानुपर्दछ, गलाती 3: २–-२। मा पावलले हामीलाई सूचित गर्दछन् "ख्रिष्टमा बप्तिस्मा लिएका सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छन्। यहूदी र ग्रीक, दास र अभियोगी, पुरुष र महिला बीचको भिन्नता हराइसकेको छ - तपाईं सबै येशू ख्रीष्टमा एक हुनुहुन्छ। यदि तपाईं ख्रीष्टका हुनुहुन्छ भने, तपाईं अब्राहामका साँचो सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईं उहाँको प्रतिज्ञाका साँचो उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। यदि हामी पाठमा थोरै फर्क्यौं र पद - - read पढ्यौं भने हामीलाई भनिएको छ: «उसले परमेश्वरमा विश्वास गर्‍यो र यो धार्मिकताको रूपमा गनिन्थ्यो। त्यसोभए चिन्नुहोस्: तिनीहरू जो विश्वासका सन्तानहरू हुन् अब्राहामका सन्तानहरू हुन्। हामीलाई यहाँ निश्चय छ कि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने सबै अब्राहमका सन्तानहरू हुन्। यहाँ पावलले पिता अब्राहमलाई औंल्याए जसबाट हामी बनेका थियौं र हामी उहाँबाट विश्वास र भरोसाको विशेष पाठ सिक्छौं!
बुबा, बुबा अब्राहाम र हाम्रो लागि विशेष उदाहरण को लागी धन्यवाद छ। आमेन